विराटनगरलाई समृद्धिको सहर राजधानिको सहर बनाउने सपना– मेयर पराजुली – KhabarPurwanchal
५ वर्षमा धुलो र धुवा मुक्त सहर बन्छ
खबर पूर्वाञ्चल, २८ असार २०७५, बिहीबार २१:२५
स्थनिय तहको चुनाव भएको १ वर्ष भएको छ । यसै सेरोफेरोमा रहेर विराटनगर महानगरपालीकाका मेयर भिम पराजुलीसँग गरिएको कुरा कानी
तपाइले विराटनगर महानगरपालीकामा जनप्रतिनिधिको रुपमा नेतृत्व गर्नु भएको १ वर्ष भयो । यो एक वर्षको अवधिमा के–के काम भए ?
मैले सपथ ग्रहणकै दिनबाट सुसान नै समृद्धिको आधार हो भन्ने मान्याता राखेर पहिला आफुबाट सुरु गरे । विराटनगरलाई सुसासन कायम गर्ने र भ्रष्टचार गर्न नदिने र आफु पनि नगर्ने भनेर काम गरिरहेको छु । आफैबाट सुरु गर्न एक वर्षको तलब भत्ता पनि लिएको छैन । त्यो पिछडिएको र विपन्न समुदायले पढने कम्जोर अवस्थाको समुदायीक विद्यालयलाई उपलब्ध गराउने छु ।
सपथ ग्रहणको समयमा घोषण गरेको सय दिने काम पनि सफल बनाएका छौ । त्यसमा खाल्डा खुल्डी पुर्ने,मोतिया विन्दुको निशुल्क अप्रेसन,छोरी बचाउ छोरी पढाउ अभियान,पहिलो सन्तान छोरी हुनेलाई तिनहजार प्रोत्साहन दिने काम ग¥र्यौ । सँगै असक्त ज्येष्ठ नागरीकहरुलाई घरमै सामाजीक सुरक्षा भत्ता व्यवस्था सुरुवात ग¥र्यौ ।
विराटनगरको भौतिपुर्वाधार विकासमा कस्ता कामहरु भइ रहेका छन ?
विराटनगर महानगरपालीकाले आफ्ना, एडिभि,शहरी सघन र अन्य परियोजनाहरु बाट द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ । त्यसमा पनि एस टि यु इ आइ पि (मझौला शहरी एकीकृत वातावरणीय सुधार) परियोजनाको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसको ९९ प्रतिसत काम सम्पन्न भइसकेको छ । हामी आएपछि आर यू डि प्रोजेक्ट सुरु गरेका छौ । एडिबिले लामो समय भयो,राम्रो काम गर्न सकेन भने प्रोजेक्ट थप गर्दैन । एडिबि र शहरी विकासमा लभिङ गरेर विराटनगरमा ल्याउन हाम्रो नेत्रित्व सफल भएको हो ।
हामी आउदा विराटनगरमा भत्काउने मात्र काम भएको थियो । बनाउने काम म आए पछि सुरु गरेको हु । म गुणस्तर र चाडो गर्ने कुरामा कुनै पनि कम्प्रमाइज गर्दिन । आर यू डि प्रोजेक्टको काम अन्य सहर भन्दा चाडो गराएका छौ । बस टर्मिन हामी हाए पछिनै सुरु भएको हो । यसमा हामी नेपाल सरकारको तर्फबाट पुरस्किृत भएको छौ ।नेपाल भरी शहरी विकास कोषले गरेको योजनामा विराटनगर पुरस्कार पाएको हो । त्यस्तै शहरी सघनको काम पनि राम्रो भएको छ । यस आयोजनाको काम दुइवर्षको म्याद भएपनि लगभक एक वर्षमा हामीले सकिसकेका छौ । त्यसको ९५ प्रतिसत भन्दा बढी काम भइसकेको छ ।
विकास निर्माणमा जनप्रतिनिधिको कस्तो भुमिका हुने रहिछ ?
मैले के अनुभव गरेको छु भने विराटनगरमा जन प्रतिनिधि नआएको भए विराटनगरमा एडिभिको प्रोजेकट चाहि लथालिङग हुने रहिछ । किन लथालिङग हुने रहिछ भने जहा हिजो एडिविले ड्रेनहरु बनाएको थियो । ति ड्रेनको क्वालीटी थिएन । निकास थिएन । त्यस पछि सिभरेजको कनेटिभिटि थिएन । कहि ड्रेन थियो,त्यहा पिच थिएन । ब्ल्याक टप थिएन ।कहि पिच छ ड्रेन छैन । त्यस्तोमा सडक भत्तकिनु स्वभाविक हुन्छ ।र,पानिको निकास नभएको अवस्था थियो । यस्तो अवस्थालाई ट्रयाकमा ल्याएर । आर यू डि पि प्रोजेक मार्फत गुणस्तरीय र द्रुत गतिम काम गरेर अन प्लान एडिबिको प्रोजेक्ट लाई प्लान वेमा हामीे गर्न सफल भएका छौ । यो हाम्रो लागी ठूलो उपलब्धी हो विराटनगरको जन प्रतिनिधि भइ सके पछि ।
गत साउनको बाढीमा विराटनगर र विराटनगर बासीले ठूलो क्षति बेहोरेको थियो । जन प्रतिनिधि नआएको भए जसरी उद्दार गर्यौ त्यो हुन मुस्किल थियो । हामी दिन रात लागेर रेस्क्यु ग¥र्यौ । बाढी यस्तो भया भह थियो जुन उद्दार र राहत भयो जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा हुनसक्ने थिएन ।
विराटनगरका दुइवटा प्रोजेक्ट कोल्यापस हुन लागेका थियो । जसमा तारणी प्रसाद कोइराला संचार ग्राम र गुरुकुल नाटक घरको अहिले तिब्र रुपमा निर्माण भइ रहेको छ ।संगसंगै हामीले भएका योजना, कोल्यापस हुने अवस्थाका योजनालाई अगाडी बढाउने कुरा र जनातालाई तत्काल राहत दिने काम द्रुत गति ग¥र्यौ । यो हाम्रो एक वर्षको कार्यकालको अत्यन्त उपलब्धि पुर्ण कुरा हो ।
महानगरपालीकाले कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ ?
निति बनाउदा ,सभा बस्दा हामीले के भनेका छौ भने शिक्षा हाम्रो पहिलो प्रथमिकता हो । शिक्षामा सामुदायीक,सरकारी विद्यालय प्रथमिकातामा राखेर काम गरिरहेका छौ । त्यसमा नमुना विद्यालय बनाउने भनेर ५ वटा विद्यालयलाई ५० लाखको दरले सहयोग गर्ने रणनिती बनाएर काम गरिरहेका छौ । विराटनगर महानगरपालीकाको उत्तर तर्फको एउटा, ,मध्य भागको एउटा,दक्षीण तर्फको एउटा, एउटा मदर्सा र एउटा संस्कृत गरी ५ वटा सामुदायीक विद्यालयलाई बजेटको व्यवस्था गरेका छौ ।
नमुना विद्यालयहरुले हिजो भर्ना अभियानमा अत्यन्त राम्रा विद्यार्थीहरु र अत्याधिक विद्यार्थीहरु लिएर सरकारी विद्यालयको साख पनि जोगाए र गरिब विपन्न समुदायका छोराछोरी पढने वातावरण पनि सृजना गरेका छन् । सामुदायीक विद्यालयलाई सुधार गर्ने क्रममा हामीले विराटनगरका ५४ वटा सामुदायीक विद्यालय मध्ये ३२ वटा विद्यालयमा आधारभुत तहमा अग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन सुरु गरेको छौ । त्यसै गरी सबै आधार भुधारभुत विद्यालयमा न्यूनतम सुविधाहरु जस्तै खाने पनी,सौचालयको व्यवस्था गर्न बेजेट छुट्टाएका छौ । अर्को स्वस्थ्यलाई राखेका छौ । कोशि अञ्चल अस्पतालमा ट्रलि लान सक्ने अवस्था थिएन ।
ट्रली लाने पिच नगरपालीकाले बनाइ दिएको छ । अस्पतालको ढल व्यवस्थापनकोलागी बजेटको व्यवस्था गरेका छौ । फोहोरको लागी सरसफइको अभियानै चलायौ । हामीले त्यहाँको विकास समिति मार्फत कोशि अञ्चल अस्पतालाई टिचिङ अस्पतालमा रुपान्तरण गर्नको लागी नेपाल सरकार सँग कुरा गरेर अहिले टिचिङ अस्पताल बनेको छ । अस्पतालमा पुर्वाधार र विशिष्ट सेवाहरु थप्न पहल भइ रहेको छ । शिक्षा र स्वस्थ्य हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । आर्थिक अभावमा कसैलाई पढाइबाट बञ्चित हुन दिने छैनौ । साथै औषधि उपचारको अभावमा कसैलाई मर्न नदिने महानगरपालीकाले ग्यारेन्टी गर्र्छ । त्यहि जगमा हामी काम गरिरहेका छौ ।
पूर्वाधारको क्षेत्रमा अबका आउने दिनमा के–के काम गर्दै हुनु हुन्छ ?
यहाँको नहरलाई बैकल्पीक सडकको रुपमा विकास गरेका छौ । त्यस पछि हाम्रो ड्रिम प्रोजेक्टको रुपमा विराटनगर–३ मा भ्यू टावरको डिपिआर सुरु गर्दैछौ । त्यसकोलागी लगभग ५० करोडको लागतमा अनुमान गरेका छौ । विराटनगर ५मा वल्र्ड बैङक मेघासिट अन्तरगत आधुनिक पार्क बनाउने तयारी गरिहेका छौ । जुन ५ विघा सात कठ्ठामा बन्ने छ । त्यस्तै प्रदेसिक बस पार्क निर्माणकोलागी बुढीगंगा गाउपालीकामा २२ विघा जमिनको व्यवस्था गरेका छौ । त्यसमा डिपिआर सुरु भइसकेको छ । यो काम पनि हामीले वल्र्ड बैङक मेघासिट अन्तर गत नै गर्न लागेका हौ ।
अर्को महत्व पुर्ण योजना विराटराजाको दवार हो । हाम्रो ठूलो सपना हो । उद्योगी व्यपारीहरु सँग सल्लाह गरेर काम गरिरहेका छौ । त्यसमा उद्योगी सुरेन्द्र गोल्छाको संयोजकमा कमिटी पनि बनाएका छौ । त्यसको डिपिआरको लागी एक करोड रुपैया छुट्टाएका छौ । एक अर्वको प्रोजेक्ट हो । विराटराजाको दरवार हेर्न संसार भरिका मानिस आउन भन्ने उद्देश्यले काम अगाडी बढी रहेको छ । दुइवटा वडामा १५÷१५ बेडको अस्पताल बनाउन २÷२ करोड छुट्टाएका छौ । उत्तर पट्टिको १९ नम्बर वडा र दक्षीण तिरको १५ नम्बर वडामा काम भइ रहेको छ ।
विराटनगरको खानेपानी समस्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनु हुन्छ ?
विराटनगरमा खानेपानीको पनि समस्या छ । त्यसकोलागी जाइका सँग लविङ गरिरहेका छौ । एक घर एक धारा अवधारण अनुसार काम गरि रहेका छौ । यसकालागी दातृ निकाय सँग पनि कुरा गरि रहेका छौ । विराटनगरमा ५६ वर्ष पुराना खाने पानिको पाइप छन । केहि ठाउमा एडीबिको कार्यक्रम अन्तरगत नयाँ पाइप फेरेका पनि छौ । धेरै ठाउमा फेर्न बाकि नै छ । हामी सिमीत स्रोत साधनमा चल्नु पर्ने अवस्था छ । त्यसैले यो हाम्रो लागी चुनौती छ ।
संघिय सरकारले विराटनगर महानगरपालीकालाई बजेट किन कम छुट्टाएछ ?
विराटनगरलाई अन्य महानगर भन्दा १ अर्ब बजेट कम गरेको छ । यो अत्यन्त दुखद कुरा हो । राज्यले हामीलाई हेपे जस्तो महसुस गरेका छौ । यसको लागी सम्बन्धित मन्त्रालयमा सचिव देखि संसद ज्युहरु सम्मलाई कुरा राखेका छौ । आवश्यक पहल गरि दिन पनि अनुरोध गरिरहेका छौ । विराटनगर उपमहानगरपालीका भनेर बजेट दिएको रहिछ । सबैले कुरा राखे पछि नाम चाहि महानगरपालीका तर बजेट चाहि उपमहानगरपालीकाको छुट्टाएको रहिछ । यसको हामीले विरोध गरिरहेका छौ । यो कुनै पनि हालतमा सच्चिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । किन भने त्यहा जे डाटा छ त्यो डाटा गलत छ । त्यसलाई सच्याइनु पर्छ । त्यो उपमहानगरपालीकाको डाटा राखेर महानगरपालीकामा कम बजेट हालेको देखिएको छ ।
विराटनगर अस्थाइ राजधानि त भयो स्थाइ बनाउन महानगरले के गर्दै छ ?
विराटनगरको जुन आर्थिक,सामाजीक,राजनैतिक र ऐतिहासीक गौरव छ त्यसलाई कायम गर्न पनि हामीले पुर्वाधरमा सुधार गर्नु पर्ने छ । विराटनगर अस्थाइ राजधानि हो । स्थाइ राजधानि बनाउनु पर्छ भनेर लागी रहेका छौ । विराटनगरलाई स्थाइ राजधानि बनाउन सकिन्छ हामी संग प्रयाप्त पूर्वाधार छन । त्यसकोलागी हिजो पनि लविङ ग¥यौ । प्रधानमन्त्री देखि लिएर पार्टीका अध्यक्ष सबैलाई भेटेर कुरा राखेका थियौ । हाम्रो विशेष पहलमा विराटनगर अस्थाइ राजधानी भएको छ । यसलाई स्थाइ राजधानी बनाउन यी सबै कुरा आवश्यक हुन्छ भनेर त्यहि जगमा काम गर्दै छौ ।
विराटनगर १९ मा अन्तराष्ट्रिय स्तरको सभागृह बनाउदै छौ । त्यसकोलागी ५ विघा जमिन लिइ सकेका छौ । त्यो हाम्रो ड्रिम प्रोजेक्ट हो । २५ सय जना अटन सक्ने सभागृहमा भोली राजधानी हुदा अन्तराष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम गर्न सक्छौ । त्यो हाम्रो प्रथमिकतामा छ ।
विराटनगरमा पनि मनो रेलको कुरा आइ राखेको छ । खास के हो ?
मनो रेल महानगरको योजना होइन । कुनै प्राइभेट संस्थाले पिपि मोडलमा जाउ हामी बजेट ल्याउ छौ भनेकोले आएको हो । कसैले बजेट ल्याउ छ भने किन नगर्ने । यो हाम्रै फाइदाको लागी हो । संस्थाले यहाबाट स्विकृति चाहेको हो । मनो रेल आउछ भने किन सहयोग नगर्ने । हामी पनि हाम्रो तर्फबाट सकने जति गर्छौ ।
निजि क्षेत्र सँग साझेदारीमा पनि विकास निर्माणको कामलाई अगाडी बढाउन चाहान्छौ ।
महानगरको आफ्नै स्रोतले मात्र विकास सम्भव छ र ?
विराटनगरमा हामीले आन्तरीक स्रोतबाट आफैले र प्रदेश सरकार,संघिय सरकार सँग बजेट मागेर हुन्छ की अथवा दातृ निकाय सँग सहयोग मागेर हुन्छकी वा संसरकार विकसीत शहरहरु सँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरेर त्यहाँको सिप,प्रविधि र त्यहाका ठूलठुलो योजनाहरु विराटनगरमा भित्राउने हाम्रो कार्यनिति छ । त्यो अनुसार काम गरि रहेका छौ ।
काम गर्न चनौति कत्तिको छ ?
चुनौतिहरु छ । चुनौति स्वभाविक रुपमा हुन्छ नै तर अहिले जनप्रतिनिधि आइ सके पछि कहि पनि त्यस्तो समस्या छैन । घोघामा बाटो बनाउदा जग्गा वालाले लगभग तिन करोड पर्ने जग्गै उपलब्ध गराइ दिनु भयो । त्यस कारण यो हाम्रो लागी उपलब्धि हो । हामीले नागरीक समाज सँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेका छौ । काममा बाधा हुने गरि चुनौतिको सामाना गर्नु परेको छैन ।
महानगरका कर्मचारीबाट जनप्रतिनिधिहरुले कत्तिको सहयोग पाइरहनु भएको छ ?
कर्मचारी र जनप्रतिनिधि नङ र मासु जस्तो हुनु पर्छ । म त नैतिकता र इमान्दारीताको जगमा काम गरेको मान्छे । आफुमा स्वर्थ भएन भने काम गर्न कहि पनि समस्या हुदैन । मैले इमान्दारी पुर्वक भनेको छु । हिजो के हुन्थ्यो थाहा छैन । अब कुनै पनि किसीमको अन्यमितता र गलत काम कसैले ग¥यो भने म कारवाहि गर्छु । यो कुरा मैले प्रष्ट भनेको छु । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्छौ । कर्मचारीहरुलाई विदेश पनि पठाएका छौ । नराम्रो काम गर्नेलाई हामी कारवाहि गर्छौ । यसमा हाम्रो कुनै पनि कम्परमाइज हुदैन । म आफु जानेर कुनै कल्ती गर्दीन । अन्जानमा कुनै गल्ती भए छ भने म त्यसलाई सच्याउ छु । र,स्थानिय जनताको जुन विश्वास र आस्था छ त्यसलाई म मर्न दिन्न ।
तपाईले भनिरदा बाटो नबनेको जन गुनसो पनि आइ रहेका छन् त ?
विराटनगर महानगरपालीकाले जति काम कुनै पनि महानगरपालीका,नगरपाली र गाउपालीकाले गरेको छैन । अघि मैले जुन–जुन योजना र काम भने एक वर्ष भित्रमा भएका हुन । अस्ति हामीले पत्रकारहरुलाई भिजिट पनि गरायौ । वहाँहरु आफै दंग पर्नु भयो । विराटनगर भित्र पो नगरेको रहेछ बाहिर त धेरै काम भएको रहेछ भन्दै हुनु हन्थ्यो । तपाइलाई म भनु, यो भन्दा अघि विराटनगरमा दुइदिन पानी पर्दा जलमग्न हुन्थ्यो । अजा चारपाच दिन देखि पानि परिरहेको छ तर विराटनगरमा पानि जमेको छैन ।
पानी परेको समयमा बाटो बनिरहेको स्थानमा हिलो हुनुलाई सामान्य कुरा नै मान्छु । च्याङबारी,धुधुवालगायतका सबै ठुला पैनी हामीले सफा गरिसकेका छौ । जहा जाहाँ थुनिएका थिए ति सबै नालाहरु सफा गरिरहेका छौ । तसर्थ हिजोको अवस्थामा भन्दा विराटनगरमा धेरै काम भएका छन् । विहान देखि बेलुका सम्म काम गरि रहेका छौ । म ६ घण्टा पनि राम्रो सँग सुतेको छैन । हामीले बढी काम गरेका छौ ।यद्यपी अझै बढी काम होस भन्ने चाहना हुन्छ ।
इभन छलेनको सडक ०६९ साल देखि सुरु भएको हो । हामी आएपछी नौ मिटर पिच गर्ने । ड्रेन बनाउने काम तिब्र भएको छ । क्वालीटीको काम भएन भनेर मैले पाच जनालाई थुनाए । मैले राम्रो काम नगरेको भए । अन्यमितता भ्रष्टचार गरेको भए मैले ठेकेदारलाई थुन्न सक्थे ? सामाजीक संजालमा आउथ्यो । मिडियामा आउथ्यो । पैसा मागो होला दिएन अनि ग¥यो भन्ने हुन्थ्यो । आफु इमान्दार भयो भने काम गर्न सकिन्छ ।
५ वर्ष पछि कस्तो विराटनगर बन्ने छ ?
५ वर्ष भित्र हिलो र धुलो मुक्त विराटनगर बनाउ छौ भन्ने हाम्रो संकल्प छ । यहि ५ वर्षमा विराटनगरका ४ सय किलोमिट सडक पिच गर्ने लक्ष्य छ । विराटनगरलाई गौरव गर्ने खालको,समृद्धिको सहर,राजधानिको सहर,सबैको सहर र सफा स्वच्छ हराभरा विराटनगर बनाउने मेरो परिकल्पाना छ । र,म ५ वर्ष भित्र सोचे जस्तो सहर विराटनगर बनाउने छु । ५ वर्ष देखि विराटनगर नआएकालाई आउदा कहा आएछु भन्ने लाग्ने बनाउछु ।
यसरी विकास गरिरदा हाम्रो परम्परा, संस्कृति जोगाउन कत्तिको ख्याल राख्नु भएको छ ?
विकास निर्माणले हाम्रा संस्कार संस्कृतिहरुको पनि संरक्षण गर्दै अगाडी बढने छौ । विराटनगरका पुराना बरु लोप भएका अवशेषहरुलाई खोजेर पुन स्थापित गर्ने छौ । हाम्रा सबै अवयवहरु,धर्म संस्कृतिलाई बचाएर बनाए लिएर जाने छौ । सबैको अपनत्व ग्रहण गराएर यो महानगरपालीका मेरो,चाहे त्यो रिक्सावाला होस ,चाहे त्यो चौबाटोमा बदाम बेचने होस, चाहे त्यो खरबपति किन नहोस सबैलाई जोडर महानगरपालीका आगडी बढ छ । हामीले १९ वटा भन्दा बढी ऐनहरु बनाएका छौ । प्लान वेमा हामी अगाडी बढेका छौ । विराटनगरलाई समृद्धिको सहर राजधानिको सहर बनाउने हाम्रो सपना छ ।
४ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार १०:४४